ဖေဖော်ဝါရီ, 1910 ။
အဆိုပါ Atlanteans ပျံသန်းနိုင်မယ့်ယုံကြည်ချက်ရှိသည်မဟုတ်လော သို့ဆိုလျှင်အဘယ်အရပ်ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက်ဖော်ပြထားသလဲ?
ပလေတိုသည်အနောက်ကမ္ဘာဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ပထမဆုံးသိကျွမ်းခဲ့သူဖြစ်နိုင်သည်။ သူ့နောက်လိုက်အခြားသူများကထိုအကြောင်းအရာကိုယူပြီးရှေးခေတ်အီဂျစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဟောင်းများထံမှသူအားကူးစက်ခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုသောသူ၏ဘိုးဘေး Solon မှသူပေးခဲ့သောသမိုင်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးကြသည်။ ဒဏ္legာရီများစွာသည်ကျွန်းသို့မဟုတ် Atlantis ၏တိုက်ကြီးပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ဆင်းသက်လာသည်။ ဘေကွန်ကထိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်၊ သို့သော်အထင်ရှားဆုံးမှာ Ignatius Donnelly ၏စာအုပ်ပင်ဖြစ်သည် -“ Atlantis; အဆိုပါရှေးဟောင်းကမ္ဘာ။ " အတ္တလန္တိတ်အကြောင်းရေးသားခဲ့သူ၊ ဝေဟင်မှရေကြောင်းသွားလာမှုသို့မဟုတ်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ပျံသန်းနိုင်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်အရာများကိုမျှဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
၁၈၈၈ တွင် Madame Blavatsky ကသူ၏“ Secret Doctrine” ကိုထုတ်ဝေသည်အထိအတ္တလန်တာများနှင့်ပျံသန်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျစွာပြောခဲ့သည်။ “ လျှို့ဝှက်အယူဝါဒ” တွင် Madame Blavatsky ကအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာများနှင့်အတူလေကြောင်းသွားလာမှုသည်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ပြီးသူမကအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာပျက်စီးခြင်း၏အကြောင်းရင်းနှင့်လေကြောင်းသွားလာမှုသည်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်မည်သို့အရေးပါကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Madame Blavatsky သည်ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ဂုဏ်အသရေကိုသူကိုယ်တိုင်မဖော်ပြခဲ့ပါ။ သူမသည်“ လျှို့ဝှက်အယူဝါဒ” တွင်သူမပြောသောအရာများသည်မသေနိုင်သည့်ဖြစ်လာပြီးမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းသမိုင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောအတ္တလန္တိတ်၏သမိုင်းမှသူမအားပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည် တိုက်ကြီးများနှင့်လူသား၏လူမျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အချိန်တစ်လျှောက်လုံး၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုများမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောကမ္ဘာမြေ၏ဘူမိဗေဒနှင့်အခြားပြောင်းလဲမှုများ။ “ လျှို့ဝှက်အယူဝါဒ” ကိုလက်လှမ်းမမှီနိုင်သည့်မေးခွန်းကိုရေးသားသူနှင့်အခြားသူများကဤစာအုပ်၏အောက်ပါကိုးကားချက်များကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
“ စတုတ္ထမျိုးနွယ်စုမှအစောပိုင်းအာရိယန်လူမျိုးများသည် 'အံ့' စရာအစုအဝေး 'အကြောင်းကိုသူတို့၏ဗဟုသုတကိုရရှိခဲ့သည်၊ Mahabharata တွင်ဖော်ပြထားသည့် Sabha နှင့် Mayasabha, Pandavas မှ Mayasura လက်ဆောင်များ။ သူတို့ထံမှလေယာဉ်ပျံများ၊ ဗွီဝမ်၊ ဗီဒီယာ၊ လေယာဉ်ပျံသန်းခြင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်သူတို့၏အကြီးစားမိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒပညာရပ်များကိုသူတို့လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသည်။ အာရိယန်လူမျိုးများသည်သူတို့၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးနှင့်အခြားကျောက်တုံးများ၏အဖိုးတန်ကျောက်တုံးများ၊ ဓာတုဗေဒ (သို့) Alchemy၊ Mineralogy၊ ဘူမိဗေဒ၊ ရူပဗေဒနှင့်နက္ခတ္တဗေဒတို့၏အဖိုးတန်ဆုံးသိပ္ပံကိုအမွေဆက်ခံခဲ့သည်။ ” (3d Ed ။ Vol ။ II ။ , p ။ 444. )
“ ' ။ ။ ထိုအခါအဝါရောင်မျက်နှာအားလုံး၏အကြီးအကဲဖြစ်သော“ ပြောင်ပြောင်တောက်သောမျက်နှာ၏မဟာဘုရင်” သည်လူမည်းများ၏အပြစ်များကိုတွေ့မြင်။ ဝမ်းနည်းခဲ့သည်။
သူသည်မိမိ၏လေယာဉ်များ (Vimanas) ကိုသူ၏ညီအစ်ကိုအကြီးအကဲများ (အခြားနိုင်ငံများနှင့်လူမျိုးစုအကြီးအကဲများ) သို့အတွင်းထဲရှိဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများနှင့်အတူပြင်ဆင်ပါ။ , ထိုကောင်းမွန်သောဥပဒေ, သင်တို့သည်လူထနှင့် (သေး) ခြောက်သွေ့သောအနေဖြင့်တပြည်လုံးကိုဖြတ်ကူး။
မုန်တိုင်းတို့၏သခင်သည်အနီးသို့ရောက်တော်မူ၏။ သူတို့၏ရထားတို့သည်ပြည်ကိုလုယူကြ၏။ တစ်ညနှင့်နှစ်ရက်သာအမှောင်ထု၏အရှင်သခင်များ (မျှောဆရာများ) သည်ဤလူနာနယ်မြေတွင်နေထိုင်ကြလိမ့်မည်။ သူမသည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်သူတို့နှင့်အတူဆင်းသက်လာရန်လိုသည်။ အောက်ပိုင်း Lords of the Fires (Gnomes and Fire Elementals) သည်သူတို့၏မှော်အဂ်နက်ထထရာကို (Magic မှလုပ်ကိုင်သောမီးသတ်လက်နက်များ) ပြင်ဆင်နေကြသည်။ သို့သော်အမှောင်မျက်စိ၏သခင် (“ Evil Eye”) သည်သူတို့ (Elementals) များထက်ပိုမိုအားကောင်းပြီးတန်ခိုးကြီးသူများ၏ကျေးကျွန်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် Astra (အမြင့်ဆုံးမှော်အသိပညာ Vidya) တွင်တတ်ကျွမ်းကြသည်။ သင်၏နတ်ဝင်သည်များကိုတန်ပြန်ရန်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆိုလိုသည်မှာသင်၏မှော်စွမ်းအားများ) လာပြီးအသုံးပြုပါ။ ပြောင်ပြောင်တောက်သောမျက်နှာ၏သခင်တိုင်း (အဖြူရောင်မှော်အတတ်ကိုကျွမ်းကျင်သူ) သည်မှောင်မိုက်သောမျက်နှာ၏သခင်တိုင်း၏လက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုပါစေ (သို့မဟုတ်နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်) အားဖြင့်ရေများမှမလွတ်မြောက်စေရန် လေးပါး၏လှံတံကိုရှောင်ကြဉ်လော့။ ဆိုးသောသူ (နောက်လိုက်များသို့မဟုတ်လူများ) ကိုကယ်တင်ကြလော့။ ' ” (Ibid, p ။ 445. )
“ (သို့သော်) ယခုအခါလူအမျိုးမျိုးတို့သည်သွေ့ခြောက်သောမြေကိုကူးမြောက်ကြပြီ။ သူတို့ကရေတံဆိပ်ကိုကျော်လွန်ပြီး။ သူတို့၏ဘုရင်များသည်သူတို့ကို Vimanas တွင်ရောက်ရှိပြီးမီးနှင့်သတ္တု (အရှေ့နှင့်မြောက်) နိုင်ငံများသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ' ”
" '' ရေသည်ထနှင့်အခြားဖို့ကမ္ဘာမြေ၏တဦးတည်းအဆုံးကနေချိုင့်ဖုံးအုပ်လေ၏။ မြင့်မားသောမြေများကျန်ရှိနေသေးပြီးကမ္ဘာမြေ၏အောက်ခြေ (ဆန့်ကျင်သောမြေများ၏မြေများ) ခြောက်သွေ့နေခဲ့သည်။ လွတ်သောသူတို့သည်နေကြ၏။ အဝါရောင်မျက်နှာများနှင့်မျက်စိဖြောင့်သူများ (ပွင့်လင်းပြီးရိုးသားသူများ) ။
နက်နဲသောမျက်နှာများ၏သခင်များသည်နိုး။ မြင့်မားသောရေများမှလွတ်မြောက်ရန်မိမိတို့၏ ၀ ီဝမ်လူမျိုးများနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထင်မှတ်သောအခါသူတို့၏ပျောက်ကွယ်သွားမှုကိုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ” (Ibid ။ စ။ ၄၄၆)
ဝေဟင်အညွှန်း၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်သူတစ်ဦးချင်းစီ, Atlanteans ဝငျစားပါသလား?
ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးသည် Atlantean အလောင်းများမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သောစိတ်များသည်ယခုတွင်တည်ဆောက်လျက်ရှိသောလူ့ယဉ်ကျေးမှုတွင်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဤယဉ်ကျေးမှုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်၎င်း၏အလယ်ဗဟိုနှင့်၎င်း၏အကိုင်းအခက်များနှင့်ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်အထိကျယ်ပြန့်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးမှာဤခေတ်ကိုတီထွင်သူများမှာအတ္တလန်တစ်သိပ္ပံတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ကြားခြင်းခံခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အတ္တလန်တစ္စတွင်အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်တွင်အလားတူတီထွင်မှုအသစ်များကိုဖြစ်ပေါ်လာစေသူများဖြစ်သည်။ တီထွင်မှုများထဲတွင်ပျံသန်းမှု၏ပါဝင်သည်။ လူသား၏ပျံသန်းနိုင်မှု (သို့) လေကြောင်းသွားလာနိုင်မှုကိုမကြာသေးမီအချိန်ကပင်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခံခဲ့ရပြီး“ သိပ္ပံနည်းကျ” ဆုံးသောစိတ်များပင်လျှင်အကြံပေးချက်ကိုသရော်လှောင်ပြောင်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကို ignis fatuus သို့မဟုတ်ကလေးဆန်သောအယူသီးခြင်းအဖြစ်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ လေယာဉ်ပျံနှင့် dirigible balloon ကိုတီထွင်မှုကလေကြောင်းသွားလာမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထိုအရာများကဝေးလံသောဝေးလံသောဒေသရှိလူတစ် ဦး သည်ယခုအခါသူ၏လမ်းခရီးကိုထိထိရောက်ရောက်မောင်းနှင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည် ရေကတဆင့် လူ၏စိတ်သည်ဝေဟင်သွားလာရန်အခက်အခဲများကိုလျင်မြန်စွာကျော်လွှားနိုင်သည်။ သို့သော်သူသည်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးသော်လည်းလွယ်ကူသောပျံသန်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုသူဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ လူသားသည်ငှက်များပျံသန်းသကဲ့သို့အလွယ်တကူပျံသန်းနိုင်သည်၊ သို့သော်လေယာဉ်ပျံသန်းရာတွင်ငှက်များအသုံးပြုသည့်အင်အားကို ဆက်သွယ်၍ အသုံးပြုရန်သင်ယူပြီးမှသာပျံသန်းနိုင်သည်။ ငှက်များသည်ပျံသန်းရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ သူတို့ကစစ်ဆင်ရေးသို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သော၊ ၎င်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာများနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်၎င်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရွေ့လျားစေသောစွမ်းအားတစ်ခုဟုခေါ်သည်။ ငှက်များသည်ပျံသန်းနိုင်သည့်စွမ်းအားအတွက်သူတို့၏အတောင်များပေါ်တွင်မူမတည်ပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အတောင်ပံတွေနဲ့အမြီးကိုပိုပြီးချိန်ခွင်လျှာသို့မဟုတ်လီဗာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပြီးခန္တာကိုယ်ကလေရဲ့စီးဆင်းမှုကိုဖြတ်ပြီးထိန်းညှိပေးတယ်။ လူသည်သူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ယခုငှက်များကိုမည်သို့ပြုသနည်း၊ သူသည်လေကိုလမ်းပြနိုင်သည့်စက်များကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သူကိုယ်တိုင်ရှိသည့်အင်အားကိုသူတည်ဆောက်နိုင်သည့်ပျံစက်များနှင့်ချိန်ညှိရန်နှင့်ဆက်နွယ်ရန်သင်ယူခဲ့မှသာလေကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်သွားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ လူသည်ဤခေတ်ကာလ၌ဤသို့ပြုလုပ်နိုင်ပါကအတိတ်ကာလ၌လူသည်အလားတူပြုခဲ့ခြင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်မြင့်မားသည်။ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာသည်လေယာဉ်ပျံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်စွမ်းအားကိုဗဟုသုတ ရှိ၍ သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်စေခြင်း၊ ပျံသန်းစေခြင်းနှင့်လေအားစက်များနှင့်တူညီသောစွမ်းအင်ကိုညှိနှိုင်းခြင်းအားဖြင့်လေယာဉ်ကိုထိန်းညှိပေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့အလိုတော်နှင့်အညီထိုကဲ့သို့သောစက်များ၏။ စိတ်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှတစ်ခုသို့အသက်အရွယ်အလိုက်အသက်ပြန်ရှင်လာသည်။ လူသား၏စိတ်သည်လူမျိုးတစ်မျိုး (သို့) ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတွင်ပညာတတ်။ စုံလင်ခြင်းမရှိပါ။ စိတ်သည်လူမျိုးများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများစွာကိုဖြတ်သန်းသွားရန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသည်။ ဒါဟာလေကြောင်းသွားလာမှု၏မေးခွန်းသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်နှင့်အတူပါဝငျသောစိတ်များ Atlantis အတွက်ပြproblemနာနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြအတူတူပင်စိတ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်းဆိုပါစို့။
အဆိုပါ Atlanteans ဝေဟင်အညွှန်းများ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခဲ့, ယခုတူညီတဲ့ပြဿနာနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်နေသောသူတို့ကို Atlanteans ခဲ့ကြသည်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်ဤအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း Atlantis ၏နစ်မြုပ်ကတည်းကနှင့်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မရောက်မှီအဝငျစားမလာကြနဲ့သူတို့ကရှေ့တော်၌ဝငျစားကြပါလျှင်ပါလျှင် လက်ရှိအသက်အရွယ်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလေကြောင်းကျွမ်းကျင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မရောက်မှီအပျံသန်းနိုင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လော
အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရေကြောင်းပြမှုပြsolveနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုအတ္တလန္တစ္စတည်ရှိကြောင်းလည်းသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့၎င်းကိုခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာကလိုအပ်သောသက်သေအထောက်အထားများဖြင့်သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ Sargassa ပင်လယ်မှပေးသောသို့မဟုတ် Atlantis ကဲ့သို့သောတည်ရှိမှုရှိသည်ဟူသောအထောက်အထားများစွာရှိသည်။ သို့သော်လက်ရှိလူသားများသည်လေကြောင်းသွားလာမှုပြsolveနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါက Atlantis ရှိလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သည်လည်း၎င်းကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုယူဆခြင်းသည်မသင့်လျော်ပါ။ ပြန်လည်ဝင်စားခြင်းဆိုတာတကယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်၊ အကယ်၍ ဒီနေ့အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးလေကြောင်းနဲ့အတူစက်တွေဆောက်တဲ့သူတွေက Atlantis မှာရှိတဲ့ဝေဟင်ပြwithနာကိုသိပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်ဝင်စားနိုင်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ အတ္တလန်တာ၏နစ်မြုပ်ကတည်းကနိုင်ငံများစွာအတွက်။ သို့သော်ကြီးမားသောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်အခြားယဉ်ကျေးမှုတိုင်း၌အခြားအချိန်များတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ စိတ်တစ်ခုစီသည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိဝေဟင်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးသောကြောင့်အခြားတိုင်းပြည်များနှင့်အကျိုးအမြတ်မများသည့်အချိန်များ၌အခြားအလောင်းများတွင်ပျံသန်းသောစက်များကိုပျံသန်းနိုင်ခြင်း၊
ဝေဟင်မှရေကြောင်းသွားလာမှုသည်သိပ္ပံပညာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သိပ္ပံပညာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားသိပ္ပံများမပါဘဲမှီခို။ မရနိုင်ပါ။ သိပ္ပံအချို့ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သေးမှီလေကြောင်းသွားလာမှု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမအောင်မြင်နိုင်ပါ။ စက်ပြင်၊ ရေနွေးငွေ့၊ ဓာတုဗေဒ၊ လျှပ်စစ်ကဲ့သို့သောသိပ္ပံပညာများသည်လေကြောင်းအောင်မြင်စွာသွားလာရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်အခြေခံအသိပညာကိုမဆိုစိတ်တွင် ၄ င်း၏ဗဟုသုတ၊ စွမ်းအားနှင့်ပျံသန်းနိုင်စွမ်းတို့ရှိနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ကိရိယာများကိုတီထွင်ပြီးသည်အထိ၊ စိတ်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ထည်ကိုထိန်းချုပ်သောဥပဒေများနှင့်အကျွမ်းတဝင်မရောက်မချင်းလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောများသို့မဟုတ်စက်ယန္တရားများမရှိနိုင်ပါ။ အောင်မြင်စွာဆောက်လုပ်ထားသို့မဟုတ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်၌သာဤသိပ္ပံများကိုပြန်လည်နူးညံ့စေပြီးပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သူတို့ပေးသောသတင်းအချက်အလက်သည်လေထဲမှပျံသန်းရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသောအခါမှသာလေကြောင်းသွားလာမှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ ရှေးခေတ်ကသိပ္ပံပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရှိကြသည်မှာအတော်အတန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်သူတို့သည်တဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့သည်အတူတကွသိပ္ပံအားလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောဗဟုသုတရှိကြောင်းပြသရန်အထောက်အထားအဖြစ်သက်သေပြရန်မလိုအပ်ပါ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းငါးထောင်အတွင်းဥရောပသို့မဟုတ်အာရှနိုင်ငံများတွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့်တစ် ဦး ချင်းစိတ်သည်လေယာဉ်ပျံများတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပျံသန်းရန်လိုအပ်သောအခြေအနေများကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ အကယ်၍ အခြားအကြောင်းပြချက်မရှိလျှင်၊ တိုင်းပြည်၏ဘာသာရေးစိတ်စွန်းကွက်မှုများကြောင့်သူသည်အတ္တလန္တိတ်တွင်သူလျှောက်ထားခဲ့သည့်ဗဟုသုတကိုအသုံးမပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာ၏စာသားစာအုပ်များအားလုံးကိုကမ္ဘာမှဖယ်ရှားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးကျယ်သောတီထွင်သူများနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မထိတွေ့ဘဲကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်သေ။ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပါကထိုသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်တီထွင်သူများထဲတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ဘဝကသူတို့စွန့်ခွာခဲ့ကြရသောယဉ်ကျေးမှုများကိုအခြေအနေများပေးနိုငျသညျ။ သူတို့နေထိုင်ခဲ့၊ သိပြီးပြုခဲ့သောအသိပညာဖြင့်သူတို့လုပ်နိုင်သမျှမှာပြောင်းလဲသွားသည့်အခြေအနေများတွင်၎င်းတို့အားအလားတူပြုလုပ်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ သူတို့လုပ်နိုင်သမျှမှာရှေ့ဆောင်များအဖြစ်အမှုဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အနာဂတ်တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအသိပညာများရရှိစေရန်၊ လူတို့အားအချို့သောအချက်အလက်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်နှင့်၎င်းတို့အားသိပ္ပံ၏အခြေခံများကိုနားလည်ရန်ပညာပေးရန်တာ ၀ န်ယူလိမ့်မည်။ ဘ ၀ တစ်ခုသည်၎င်းတို့အားအခြေအနေများတည်ဆောက်ရန်နှင့်ခေတ်သစ်အားသာချက်များကိုလိုချင်သောဆန္ဒရှိသည့်အထိလူတို့အားပညာပေးရန်အချိန်လိုအပ်သည်ကိုခွင့်မပြုပါ။ ပြည်သူလူထုအတွင်းရှိအခြားအဆင့်မြင့်သောစိတ်များနှင့်အဆင့်မြင့်စိတ်များသည်အချို့သောဥပဒေများကိုဖော်ထုတ်။ “ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်၏စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုတိုးတက်စေခြင်းများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှသာလျှင်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေခံရှိသည်” ဖြစ်နိုင်သည်။ ယခင်လူ့ယဉ်ကျေးမှုများပြိုလဲပြီးနောက်မှောင်မိုက်ထဲသို့နစ်မြုပ်ပြီးနောက်လူသားတို့အားပညာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ခေတ်ကာလကိုကြာမြင့်ခဲ့သည်။ လူသားများသည်အမှောင်ထုမှသိခြင်း၊ မသိမှုနှင့်စွန်းကွက်မှုများမှပေါ်ထွက်လာပြီးလူ့ဇာတိများသည်ပိုမိုလွတ်လပ်လာသည်နှင့်အမျှအတိတ်ကာလယဉ်ကျေးမှုများ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာသည် ထပ်မံ၍ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့ဖွယ်အမှုများအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသောအရာများပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာချိန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်၊ သို့သော်တဖြည်းဖြည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လာသည်။ အတ္တလန္တိတ်အလောင်းများတွင်နေထိုင်သူများနှင့်လေကြောင်းခရီးသွားသူများသည်အတ္တလန္တိတ်နစ်မြုပ်ချိန် မှစ၍ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြရမည်ဖြစ်ပြီးရာသီနှင့်အချိန်သည်သူတို့၏လေကြောင်းပျံသန်းမှုဆိုင်ရာအသိပညာကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးသော်လည်းဤတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အချိန်သည်နီးကပ်နေပြီ အတိတ်အကြောင်းကိုသူတို့၏အသိပညာကိုပစ္စုပ္ပန်သို့ခေါ်ပါ၊ အကြောင်းမှာအခြေအနေများအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး၎င်းတို့သည်မေ့ပျောက်သွားသည့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိလေယာဉ်မှူးများဖြစ်သောကြောင့်သူတို့သည်လေထုကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနှင့်အနာဂတ်တွင်ပျံသန်းနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။